တရားမ၀င် တပ်မဟာ ၂ ခု ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ KIA – Yuyalay
တရားမ၀င် တပ်မဟာ ၂ ခု ထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ KIA
by hJSiEhBtVShgBFYuJo in News
KIO/KIA ရဲ့ တပ်ဌာနချုပ်တွေကို နောက်ဆုတ်ပေးဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင် ဦးစီးတဲ့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ KIO ခေါင်းဆောင် အင်ဘန်လတို့ မြန်မာ – တရုတ် နယ်စပ်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်….
ဆွေးနွေးပွဲမှာ KIA အနေနဲ့ ရင်း ၁၄ အပါအ၀င် အခြားသော တရားမ၀င်တဲ့ စခန်းတွေနဲ့ တပ်မဟာတွေကို ဖြုတ်သိမ်းဖို့နဲ့ ထပ်မံပြီး တပ်မဟာတွေ တရားမ၀င် ဖွဲ့စည်းခြင်း မပြုလုပ်ဖို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် KIA ဘက်ကတော့ လိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့သလို တပ်မဟာ(၂)ခုကို ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သော်လည်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ရောက်မှ တပ်မဟာ(၉)နဲ့ တပ်မဟာ(၁၀)ကို တရားမ၀င် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်…
တပ်မဟာ(၉)ကတော့ ဥရုဆိုင်းမော်နယ်ဘက်မှာ ဖြစ်ပြီး တပ်မဟာ(၁၀) ကတော့ ကချင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းဘက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…
လက်ရှိ လူအင်အားကတော့ ၁၀ ဂဏန်း ကျော်ကျော်သာဖြစ်ပြီး အခြားသော တပ်မဟာတွေက လူတွေကို ဆွဲထုတ်ပြီး တာဝန်ပေးအပ် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်…
ကြိုတင်သတိပေးချက်ကို လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ အခုလို တရားမ၀င် တပ်မဟာ(၂)ခုကို ထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်ခြင်းဟာ KIA အနေနဲ့ ကိုယ့်သေတွင်းကို ကိုယ်တူးတာနဲ့ အတူတူပါပဲ …
တပ်မတော်ဘက်ကတော့ ကြိုတင်သတိပေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် လိုက်နာခြင်းမရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုတော့ မကြာခင် ဆုံးမသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကြိုတင်သတိပေးလိုက်ပါတယ်…။
တရားမဝငျ တပျမဟာ ၂ ခု ထပျမံဖှငျ့လှဈလိုကျတဲ့ KIA
KIO/KIA ရဲ့ တပျဌာနခြုပျတှကေို နောကျဆုတျပေးဖို့ ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနကေ့ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ထှနျးထှနျးနောငျ ဦးစီးတဲ့ အစိုးရတာဝနျရှိသူတှနေဲ့ KIO ခေါငျးဆောငျ အငျဘနျလတို့ မွနျမာ – တရုတျ နယျစပျမှာ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ပါတယျ….
ဆှေးနှေးပှဲမှာ KIA အနနေဲ့ ရငျး ၁၄ အပါအဝငျ အခွားသော တရားမဝငျတဲ့ စခနျးတှနေဲ့ တပျမဟာတှကေို ဖွုတျသိမျးဖို့နဲ့ ထပျမံပွီး တပျမဟာတှေ တရားမဝငျ ဖှဲ့စညျးခွငျး မပွုလုပျဖို့ သတိပေးခဲ့ပါတယျ…
ဒါပမေယျ့ KIA ဘကျကတော့ လိုကျနာခွငျးမရှိခဲ့သလို တပျမဟာ(၂)ခုကို ဇနျနဝါရီလ ၂၆ ရကျနကေ့ ဖှငျ့လှဈပေးခဲ့သျောလညျး ဖဖေျောဝါရီလ ၇ ရကျနရေ့ောကျမှ တပျမဟာ(၉)နဲ့ တပျမဟာ(၁၀)ကို တရားမဝငျ တိုးခြဲ့ဖှငျ့လှဈလိုကျတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျးကို ထုတျပွနျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ…
တပျမဟာ(၉)ကတော့ ဥရုဆိုငျးမျောနယျဘကျမှာ ဖွဈပွီး တပျမဟာ(၁၀) ကတော့ ကခငျြပွညျနယျ တောငျပိုငျးဘကျမှာ ဖွဈပါတယျ…
လကျရှိ လူအငျအားကတော့ ၁၀ ဂဏနျး ကြျောကြျောသာဖွဈပွီး အခွားသော တပျမဟာတှကေ လူတှကေို ဆှဲထုတျပွီး တာဝနျပေးအပျ ထားတာ ဖွဈပါတယျ…
ကွိုတငျသတိပေးခကျြကို လိုကျနာခွငျးမရှိဘဲ အခုလို တရားမဝငျ တပျမဟာ(၂)ခုကို ထပျမံတိုးခြဲ့လိုကျခွငျးဟာ KIA အနနေဲ့ ကိုယျ့သတှေငျးကို ကိုယျတူးတာနဲ့ အတူတူပါပဲ …
တပျမတျောဘကျကတော့ ကွိုတငျသတိပေးမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့ပမေယျ့ လိုကျနာခွငျးမရှိတဲ့ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတှကေိုတော့ မကွာခငျ ဆုံးမသှားမှာ ဖွဈတဲ့အကွောငျး ကွိုတငျသတိပေးလိုကျပါတယျ…။
ထိုင်းနိုင်ငံ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ ရေပန်းစားနေသည့် တိုက်စစ်မှူး အောင်သူ
မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ)၏ဇနီး ဒေါ်ဆက်မီလွင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
မြောင်းမြမှာ (၉) တန်းကျောင်းသူ (၁)ဦး သားမယားပြုကျင့်ခံရ
ဓားပြတိုက်သလိုပိုက်ဆံတောင်းပြီး ပရဟိတလုပ်တဲ့အပေါ် မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့မေမြတ်နိုး
ပြည်သူ့ စစ် ၄ ဦးအပါအ၀င် သေဆုံးသူ ၁၉ ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ …
ဒုကာချုပ်က ပြောတဲ့အတိုင်းပြတ်တယ်။လက်နက်ချတာတောင်လက်မခံတော့ဘူး အပြတ်ချခိုင်းထားတယ်
ယ​နေ့ ည​နေ..၅ နာ ရီခန့်​.. လိုင်​ဇာ ကျသွားပြီဟု သတင်းများ …
တစ်ပတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်း
မင်းဘူးတံတားထိပ်မှာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် လူအများကြားထဲ မသေမချင်းကတ်ကြေးနဲ့ထိုးသတ်တဲ့မှုခင်းဖြစ်ပွား
ဒူးရင်းသီး ကြိုက်သူများ သတိပြုစရာ..
© 2018 Yuyalay. All Rights Reserved.